Raha araka ny fanazavan’ny lehiben’ny Boriborintany ao an-toerana Atoa Ramahandrimanana Solofoniaina anefa dia efa betsaka ihany ireo ezaka nataon’izy ireo niaraka tamin’ny kaominina Antananarivo renivohitra. Anisan’izany ny fisokirana ireo lakan-drano tena lehibe saingy ireo fotodrafitrasa mihitsy no efa tena antitra. Ho an’ny lakandranon’Andriantany manokana dia nomarihiny fa lasa miakatra be ny rano mikoriana ao anatiny rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao, antony tsy mety mampihena ny rano eny amin’ny arabe raha tsy ora maromaro, aorian’ny ranon’orana. Fepetra raisin’izy ireo ny fisokirana hatrany ny tata-drano raha vahaolana lavitr’ezaka arosony kosa ny tokony hanoloana iray manontolo ny fotodrafitrasa mihitsy. Ho an’ireo olona zatra manome tsiny lava ny kaominina dia nomarihin’ity delege iray ity fa ny toe-tsaina mihitsy no mila ovaina. Isika ihany mantsy hoy izy no mamono ny tenantsika noho ireo fako hariantsika any anaty tata-drano ka ilana fitandremana izany. Tsiahivina moa fa biraom-panjakana iray tetsy Anosy omaly no tsy azo nidirana mihitsy vokatry ny fahatsentsenan’ny lakan-drano ka tsy nisian’ny lalana niditra tao aminy.